किन भएन सरकार-मोर्चाबीच वार्ता ? — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » पत्रपत्रीका, मुख्य समाचार, राजनीति → किन भएन सरकार-मोर्चाबीच वार्ता ?
किन भएन सरकार-मोर्चाबीच वार्ता ?
November 10, 2015३३५ पटक
२४ कात्तिक, काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाबीच सोमबार हुने भनिएको वार्ता हुन सकेन । गत १६ कात्तिकमा भएको वीरगन्ज घटनाप्रति सरकारले माफी नमागेकाले सोमबारलाई तय वार्ता हुन नसकेको आन्दोलनरत मोर्चाका नेताहरूले बताएका हुन् ।
सरकारले वीरगन्ज घटनाप्रति माफी माग्ने बताएपछि दुवै पक्षबीच वार्ताको तयारी भएको थियो । मोर्चाको वार्ता टोलीका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापालाई फोन गरी पहिला वीरगन्ज घटनाप्रति माफी माग्न आग्रह गरेका थिए । त्यसलगत्तै थापाले मिडियालाई जानकारी गराई माफी माग्ने जवाफ दिएका थिए । आइतबार साँझ उनीहरूबीच भएको अनौपचारिक वार्तापछि सोमबार वार्ता हुने तय भएको थियो ।
कर्णसँगै तमलोपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल पनि सहभागी थिए । पछि, सरकारी टोलीका संयोजक थापाले माफी नमागेपछि सोमबार वार्ता नभएको सद्भावना पार्टीका महामन्त्री मनीष सुमनले नयाँ पत्रिकालाई जानकारी दिए । यसैगरी, आइतबार साँझ सप्तरीको भारदहमा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच भएको झडपले पनि वार्ताको वातावरण बिग्रेको मधेसी नेताहरूको भनाइ रहेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । उनीहरूका अनुसार सरकारले वार्ता भाँड्ने गरी घटना दोहोर्‍याइरहेको आरोप मोर्चाका नेताहरूले लगाएका छन् ।